Wednesday, 16 October 2019, 05:05
The shooting of Vishal Bhardwaj's 'Rangoon' starring Shahid Kapoor, Saif Ali Khan and Kangana Ranaut has finally come to an end. During an event in Mumbai Director Vishal Bhardwaj talks about the film ‘Rangoon’. Rangoon starring Saif Ali Khan, Shahid Kapoor and Kangana Ranaut is set against the backdrop of World War II.
ရန်ကုန်တိုင်းအစိုးရအဖွဲ့က ဆက်သွယ်ရေးဥပဒေပုဒ်မ ၆၆-ဃ နဲ့ ဖမ်းဆီးတရားစွဲဆိုထားတဲ့ Eleven Media Group အမှုဆောင်အရာရှိချုပ် ဒေါက်တာသန်းထွဋ်အောင်နဲ့ အယ်ဒီတာချုပ် ကိုဝေဖြိုးတို့က တိုင်းဝန်ကြီးချုပ် ဦးဖြိုးမင်းသိန်းနဲ့ အစိုးရအဖွဲ့ကို ပြန်လည်တောင်းပန်လိုက်ပါတယ်။ အခုလို တောင်းပန်လိုက်တဲ့ အတွက် အမှုအခြေအနေအပေါ် အကျိုးသက်ရောက်မှုတွေ ရှိနိုင်မလားဆိုတာကို ဒေါက်တာသန်းထွဋ်အောင်ရဲ့ အမှုမှာ လိုက်ပါဆောင်ရွက်ပေးနေတဲ့ ရှေ့နေဦးကြီးမြင့်ကို RFA သတင်းထောက် ကိုကျော်သူက ဆက်သွယ်မေးမြန်းထားပါတယ်။ လွတ်လပ်တဲ့အာရှအသံ မြန်မာသတင်းနဲ့ဗီဒီယိုတွေကြည့်နိုင်ဖို့ RFA မြန်မာဌာနဝက်ဘ်ဆိုက်: http://www.rfa.org/burmese/ RFA မြန်မာဌာနသတင်းလွှာရယူဖို့: http://www.rfa.org/burmese/subscribenewsletter RFA မြန်မာဌာန Podcast: http://streamer1.rfaweb.org/archive/BUR/Burmese_podcast.php RFA Burmese သတင်းတွေကြည့်ရှုသိရှိဖို့: Subscribe on YouTube: http://bit.ly/2ajgBxf Facebook: https://www.facebook.com/rfaburmese/?fref=ts Twitter: https://twitter.com/RFABurmese YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCE75dgnEYPacknHHg3a3sJg Soundcloud: https://soundcloud.com/burmeserfa တယ်လီဖုန်းအတွက် RFA Burmese Mobile App Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=gov.bbg.rfa&hl=en Apple: https://itunes.apple.com/us/app/radio-free-asia-rfa/id744921169?mt=8
တောင်ကြီးမြို့နယ်၊ ရေပူကျေးရွာနဲ့ ကွမ်လုံကျေးရွာတွေမှာ အစိုးရတပ်က သိမ်းဆည်းထားတဲ့ လယ်ယာမြေတွေကို ဝင်ရောက်ထွန်ယက်ခဲ့တဲ့ တောင်သူ ၇၂ ဦးကို ပိုင်နက်ကျူးလွန်မှုနဲ့ တောင်ကြီးမြို့နယ် တရားရုံးက မနေ့က အလုပ်ကြမ်းနဲ့ထောင်ဒဏ်တလစီ ချမှတ်လိုက်ပါတယ်။ တောင်သူတွေ ဘက်ကနေ ကူညီဆောင်ရွက်ပေးခဲ့တဲ့ ရှေ့နေဒေါ်ခင်မိုးမိုးကို RFA သတင်းထောက် မဝေမာထွန်းက ဆက်သွယ် မေးမြန်းထားပါတယ်။ လွတ်လပ်တဲ့အာရှအသံ မြန်မာသတင်းနဲ့ဗီဒီယိုတွေကြည့်နိုင်ဖို့ RFA မြန်မာဌာနဝက်ဘ်ဆိုက်: http://www.rfa.org/burmese/ RFA မြန်မာဌာနသတင်းလွှာရယူဖို့: http://www.rfa.org/burmese/subscribenewsletter RFA မြန်မာဌာန Podcast: http://streamer1.rfaweb.org/archive/BUR/Burmese_podcast.php RFA Burmese သတင်းတွေကြည့်ရှုသိရှိဖို့: Subscribe on YouTube: http://bit.ly/2ajgBxf Facebook: https://www.facebook.com/rfaburmese/?fref=ts Twitter: https://twitter.com/RFABurmese YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCE75dgnEYPacknHHg3a3sJg Soundcloud: https://soundcloud.com/burmeserfa တယ်လီဖုန်းအတွက် RFA Burmese Mobile App Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=gov.bbg.rfa&hl=en Apple: https://itunes.apple.com/us/app/radio-free-asia-rfa/id744921169?mt=8
Kangana Ranaut Amazing Reply On Court Case Filed Regarding Her Rangoon Character Julia. Must watch!
WATCH: Vishal Bhardwaj opens up on ‘Rangoon’; wrapped shooting of ‘Rangoon’
Interview with Lawyer U Kyi Myint on Eleven Media CEO’s Apology
Interview with Lawyer on Shan State Farmers
Kangana Ranaut Amazing Reply On Court Case Filed Regarding Her Rangoon Character Julia
ရန်ကုန်တိုင်းအစိုးရအဖွဲ့က ဆက်သွယ်ရေးဥပဒေပုဒ်မ ၆၆-ဃ နဲ့ ဖမ်းဆီးတရားစွဲဆိုထားတဲ့ Eleven Media Group အမှုဆောင်အရာရှိချုပ် ဒေါက်တာသန်းထွဋ်အောင်နဲ့ အယ်ဒီတာချုပ် ကိုဝေဖြိုးတို့က တိုင်းဝန်ကြီးချုပ် ဦးဖြိုးမင်းသိန်းနဲ့ အစိုးရအဖွဲ့ကို ပြန်လည်တောင်းပန်လိုက်ပါတယ်။ အခုလို တောင်းပန်လိုက်တဲ့ အတွက် အမှုအခြေအနေအပေါ် အကျိုးသက်ရောက်မှုတွေ ရှိနိုင်မလားဆိုတာကို ဒေါက်တာသန်းထွဋ်အောင်ရဲ့ အမှုမှာ လိုက်ပါဆောင်ရွက်ပေးနေတဲ့ ရှေ့နေဦးကြီးမြင့်ကို RFA သတင်းထောက် ကိုကျော်သူက ဆက်သွယ်မေးမြန်းထားပါတယ်။ လွတ်လပ်တဲ့အာရှအသံ မြန်မာသတင်းနဲ့ဗီဒီယိုတွေကြည့်နိုင်ဖို့ RFA မြန်မာဌာနဝက်ဘ်ဆိုက်: http://www.rfa.org/burmese/ RFA မြန်မာဌာနသတင်းလွှာရယူဖို့: http://www.rfa.org/burmese/subscribenewsletter RFA မြန်မာဌာန Podcast: http://streamer1.rfaweb.org/archive/BUR/Burmese_podcast.php RFA Burmese သတင်းတွေကြည့်ရှုသိရှိဖို့: Subscribe on Y...
တောင်ကြီးမြို့နယ်၊ ရေပူကျေးရွာနဲ့ ကွမ်လုံကျေးရွာတွေမှာ အစိုးရတပ်က သိမ်းဆည်းထားတဲ့ လယ်ယာမြေတွေကို ဝင်ရောက်ထွန်ယက်ခဲ့တဲ့ တောင်သူ ၇၂ ဦးကို ပိုင်နက်ကျူးလွန်မှုနဲ့ တောင်ကြီးမြို့နယ် တရားရုံးက မနေ့က အလုပ်ကြမ်းနဲ့ထောင်ဒဏ်တလစီ ချမှတ်လိုက်ပါတယ်။ တောင်သူတွေ ဘက်ကနေ ကူညီဆောင်ရွက်ပေးခဲ့တဲ့ ရှေ့နေဒေါ်ခင်မိုးမိုးကို RFA သတင်းထောက် မဝေမာထွန်းက ဆက်သွယ် မေးမြန်းထားပါတယ်။ လွတ်လပ်တဲ့အာရှအသံ မြန်မာသတင်းနဲ့ဗီဒီယိုတွေကြည့်နိုင်ဖို့ RFA မြန်မာဌာနဝက်ဘ်ဆိုက်: http://www.rfa.org/burmese/ RFA မြန်မာဌာနသတင်းလွှာရယူဖို့: http://www.rfa.org/burmese/subscribenewsletter RFA မြန်မာဌာန Podcast: http://streamer1.rfaweb.org/archive/BUR/Burmese_podcast.php RFA Burmese သတင်းတွေကြည့်ရှုသိရှိဖို့: Subscribe on YouTube: http://bit.ly/2ajgBxf Facebook: https://www.facebook.com/rfaburmese/?fref=ts Twitter: https://twitter.com/...
The shooting of Vishal Bhardwaj's 'Rangoon' starring Shahid Kapoor, Saif Ali Khan and Kangana Ranaut has finally come to an end. During an event in Mumbai Direc...
ရန်ကုန်တိုင်းအစိုးရအဖွဲ့က ဆက်သွယ်ရေးဥပဒေပုဒ်မ ၆၆-ဃ နဲ့ ဖမ်းဆီးတရားစွဲဆိုထားတဲ့ Eleven Media Group အမှုဆောင်အရာရှိချုပ် ဒေါက်တာသန်းထွဋ်အောင်နဲ့ အယ်ဒီတာချုပ် ကိုဝေ...
တောင်ကြီးမြို့နယ်၊ ရေပူကျေးရွာနဲ့ ကွမ်လုံကျေးရွာတွေမှာ အစိုးရတပ်က သိမ်းဆည်းထားတဲ့ လယ်ယာမြေတွေကို ဝင်ရောက်ထွန်ယက်ခဲ့တဲ့ တောင်သူ ၇၂ ဦးကို ပိုင်နက်ကျူးလွန်မှုနဲ့ေ...
The shooting of Vishal Bhardwaj's 'Rangoon' starring Shahid Kapoor, Saif Ali Khan and Kang...
ရန်ကုန်တိုင်းအစိုးရအဖွဲ့က ဆက်သွယ်ရေးဥပဒေပုဒ်မ ၆၆-ဃ နဲ့ ဖမ်းဆီးတရားစွဲဆိုထားတဲ့ Eleven Medi...
တောင်ကြီးမြို့နယ်၊ ရေပူကျေးရွာနဲ့ ကွမ်လုံကျေးရွာတွေမှာ အစိုးရတပ်က သိမ်းဆည်းထားတဲ့ လယ်ယာမြေ...
Kangana Ranaut Amazing Reply On Court Case Filed Regarding Her Rangoon Character Julia. Mu...
WATCH: Vishal Bhardwaj opens up on ‘Rangoon’; wrap...
Interview with Lawyer U Kyi Myint on Eleven Media ...
Interview with Lawyer on Shan State Farmers...
Kangana Ranaut Amazing Reply On Court Case Filed R...